Buy တန်ဖိုးနည်းအိမ်ခြံမြေကွက် (20Lks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
??? တန်ဖိုးနည်းမြေကွက်များ ၅လအရစ်ကျ ဖြင့်ရောင်းမည်
? လျှပ်စစ်မီး ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
⛳ရန်ကုန် လှိုင်သာယာ ထန်းတပင် မှော်ဘီ သို့သွားသောကားလမ်းမကြီးမှ မြေကွက်နေရာသို့၅ မိနစ်ခန့် မျှသွားရပါသည်။ လှိုင်သာယာမြို့မှ မြေကွက်နေရာသို့၁၅မိနစ်ခန်မျှလိုင်းကားစီးရုံဖြင့်ရောက်ရှိပါသည်။
☎?ဆက်သွယ်ရန် - (viber) 09*457911149